ESI TINYE MGBAKWUNYE NA MOZILE - MOZILLA FIREFOX - 2019
3 ụzọ imepụta ọhụrụ taabụ na Mozilla Firefox
Na usoro nke ọrụ nchọgharị Mozilla Firefox, ndị ọrụ na-eleta ọtụtụ ọnụọgụ weebụ. Maka mma, enwere ike ịmepụta taabụ na ihe nchọgharị ahụ. Taa, anyị ga-ele anya ọtụtụ ụzọ iji mepụta ọhụrụ taabụ na Firefox.
Ịmepụta ọhụrụ taabụ na Mozilla Firefox
Ntugharị ihe nchọgharị bụ akwụkwọ dị iche na-enye gị ohere imepe saịtị ọ bụla na ihe nchọgharị ahụ. Na Mozilla Firefox, a nwere ike ịmepụta nọmba taabụ a na-akparaghị ókè, mana ị ga-aghọta na site na ọwa ọhụrụ ọ bụla, Mozilla Firefox "na-eri" ọtụtụ ihe onwunwe, nke pụtara na arụmọrụ kọmputa gị nwere ike ịda.
Usoro 1: Ogwe Tab
Aabụ niile dị na Mozilla Firefox na-egosipụta na mpaghara elu nke ihe nchọgharị ahụ na ogwe ntụpọ. N'aka aka nri nke niile taabụ nwere akara ngosi nwere akara ọzọ, na ịpị nke ga-emepụta ọhụrụ taabụ.
Nzọụkwụ 2: Mkpịsị uhie
Pịa na ebe ọ bụla a na-anọghị na ebeabụ mmanya ahụ na bọtịnụ mkpọtụ (wiil). Ihe nchọgharị ahụ ga - emepụta taabụ ọhụrụ wee gbanwee ya ozugbo.
Usoro 3: Hotkeys
Ihe nchọgharị weebụ Mozilla Firefox na-akwado ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke mkpirisi ụzọ mkpirisi keyboard, n'ihi ya, ị nwere ike ịmepụta listi ọhụrụ site na iji keyboard. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ ọkụ dị ọkụ "Ctrl + T"mgbe nke a gasịrị, a ga-emepụta listi ọhụrụ na ihe nchọgharị ahụ na mgbanwe gaa na ya ozugbo.
Rịba ama na ọtụtụ hotkeys bụ eluigwe na ala. Dịka ọmụmaatụ, nchikota "Ctrl + T" ga-arụ ọrụ ọ bụghị naanị na Mozilla Firefox nchọgharị, kamakwa na ihe nchọgharị weebụ ndị ọzọ.
Ịmara ụzọ niile ịmepụta ọhụrụ taabụ na Mozilla Firefox ga-eme ka ọrụ gị na ihe nchọgharị a dịkwuo arụ.